सामाजिक सञ्जालको श्रृंखलाबद्ध चक्रव्यूहबाट प्रभावित वर्तमान सरकार - Emountain TV
भदौ २६, २०७७ पढ्न ९ मिनेट
काठमाडाैं, २६ भदाै । पछिल्लो समय सरकारबाट भएका निर्णयहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक बनाउँदै श्रृंखलाबद्ध रुपमा आक्रमण गर्ने कम भइरहेको देखिएको छ । यस्तो प्रकारको आक्रमणसँगै सरकारको काम प्रभावित हुने, निर्णय गर्ने बेलामा समेत सकभर पन्छिने क्रम समेत देखिन थालेको छ । केरोना संक्रमणसँगै सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल प्रभावित भए । स्थानीय निकायका वडा वडासम्मले खर्च गरेको एकमुस्ट रकमलाई मन्त्रीसँग जोड्ने काम भयो । दश अर्ब रकम कहाँ गयो भनियो । त्यसपछिका दिनहरुमा मन्त्रालयद्वारा संक्रमण लक्षित गर्नुपर्ने काममा सुस्तता आयो ।
सकभर आफू अघि नपर्ने नीति मन्त्रालयले लियो । जीटुजी भन्दै नेपाली सेनालाई पन्छाउने काम भयो । सेनाबाट भएको काम झन महँगो देखियो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म पनि संक्रमणलाई पराजित गर्ने प्रकारको नीतिगत र कार्यगत सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । विदेशमा नेपाली अलपत्र परे भनियो । पर्यटन मन्त्री योगेश भटृराईले अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने योजना बनाए । अन्तर्राष्टिय नियम अनुसार पालना गर्नुपर्ने कोभिड १९ को नियम अनुसार बाहिरबाट आउनेहरुलाई होटलहरुमा राख्नको निमित्त मन्त्रीले प्रयत्न गरे ।
महिनौदेखि बन्द रहेका होटलहरु सहजै काम गर्न सक्ने वातावरण समेत नरहेको बेला मन्त्रालयको आग्रह अनुसार मश्किलले केही होटलहरु तयार भए । त्यसपछि आरोप लगाइयो, होटल माफियाहरुको चंगुलमा पर्यटन मन्त्री भनेर । त्यतिमात्र होइन, बाहिर अलपत्र परका नेपाली ल्याउनको निमित्त नेपाल एअरलायन्स र हिमालय एअरलायन्सलाई मुख्य रुपमा खटाइयो । विदेशी एअरलायन्सले बोकेको यात्रु नेपालकै हिमालय एअरलायन्सले बोक्दा विवादित बनाइयो । राम्रै उद्देश्यका साथ गर्न खोजिएको कामलाई समेत विवादको घेरामा तान्ने काम भयो ।
प्रधानमन्त्रीले रेल सम्बन्धी कुरा गर्दा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा हेर्ने क्रमसँगै सांच्चिकै रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल वे का लागि अगाडि बढाइएको ठेक्का प्रक्रियामा विवाद आयो । स्वयं अदालतले समेत सरकारको पक्षमा निर्णय दिएसँगै झण्डै ३३ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा १६ अर्ब सरकारले खाएको हल्ला चलाइयो । प्रतिबन्धित नेकपा विप्लप समूहको समेत थ्रेट आयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित नकारात्मक टिप्पणीदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको विरोधलाई मध्यनजर गरेर सरकारले ठेक्का प्रकृया रद्द गर्न पुग्यो । परिणामस्वरुप रेल वे सम्बन्धी सरकारको कार्यक्रम अनिश्चित बन्न पुग्यो ।
यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा कित्ताकाट प्रकरण अगाडि आयो । तीन वर्ष अघि यही प्रकरणसँगै मौलाएको घुस प्रकरण र ११ वटा व्यापारिक कम्पनीहरुले एकलौटी पाएको कित्ताकाटको अधिकारलाई चुनौती दिंदै मन्त्री पदमा अर्यालले कित्ताकाट खुला गरिदिने निर्णय गर्न पुगिन । तर हल्ला चलाइयो, मन्त्री र प्रधानमन्त्री मिलेर ५० अर्बको चलखेल भयो भनेर । नेपालको भूमि बिक्री गरेर ५० अर्ब उठाउन के गर्नुपर्छ ? ५० अर्ब कति हो ? स्थानीय निकायले कृषियोग्य भनी परिभाषित गरी जमिनको कित्ताकाट गर्न दिएबापत यो रकम कसरी आउने हो ? इत्यादि न्यूनतम कुराको समेत ख्याल नगरी सम्प्रेषित नियोजित समाचारकै कारण दिग्भ्रमित हुनुपर्ने नेपालीहरुको अवस्था देख्दा कही सामाजिक संजाल नेपालको विकासको लागि अफापसिद्ध त हुँदै छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्न सकोस, काम गर्न सकोस भन्ने जनचाहना छ । तर समाचार माध्यमहरुकै कारण फैलाइएको अफवाहको कारणले सरकार प्रभावकारी कामबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थाले स्वयंम सरकारलाई मात्र होइन देशलाई नै नोक्सान पुग्न सक्छ । हरेक सरकारी निर्णयलाई पैसासंग जोड्दै निर्णयकर्ताको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा पुग्दैन । काम गरेर आलोचित हुनुभन्दा चुपचाप बस्नु ठिक हो भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो भने त्यसको असर के होला ? त्यसो त मिडियाहरुलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा स्वयम सरकार पनि व्यवस्थित देखिंदैन ।
ठूला ठूला निर्णय हुँदा समेत अपारदर्शी प्रकृयाबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियाले केही शंकाहरु उब्जाउँछ नै । तथापी काम गर्यो, किन गर्यो भन्ने, अनि काम गरेन, किन गरेन भन्ने ? यस्तो प्रवृत्तिले जिम्मेवार वातावरण बन्न सक्दैन । अफवाहको खेती बन्द गरौं । वास्तविक र भरपर्दाे सूचना सम्प्रेषणले मात्र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । जिम्मेवार सरकारले मात्र देश विकास गर्न सक्छ ।
कांग्रेसभित्र विवाद चुलिदै, महाधिवेशव प्रभावित पार्न खोजेको देउवा इतरपक्षको आरोप
कोरोना नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध अदालत जाने सरकारको तयारी
सचिवको सरुवा तत्काल बदर गर्न मन्त्री साहको माग
निषेधाज्ञाका कारण बाराको सुकुम्वासी बस्तीमा चुल्हो नै बल्न छाड्यो